Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || किन बढ्दैछ दुर्घटना ? – kayakairan.com
किन बढ्दैछ दुर्घटना ?
सडकमा सवारी साधानको चाप बढ्दो छ । सँगै दुर्घटना पनि बढिरहेका छन् । राजमार्गको लामो खण्ड, साँघुरो सडक र अत्याधिक सवारी चापका कारणले चितवनमा हरेक वर्ष सवारी दुर्घटना बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्ष २ सय ९५ सवारी साधन दुर्घटना चितवनमा हुँदा १ सय ४६ को मृत्यु भएको थियो जसमध्ये ४१ जना पैदल यात्रु थिए । २ सय ३० जना गम्भीर घाइते भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा २७१ दुर्घटनामा १३२ को मृत्यु भएको थियो । त्यसअघि ११४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
यो तथ्यांकलाई हेर्दा सवारी दुर्घटना बढ्दो देखिन्छ भने दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या पनि त्यस्तै छ । चितवनमा मोटरसाइकल दुर्घटना बढी हुने गरेको छ । गत वर्ष २०५ वटा मोटरसाइकल, ५३ यात्रुवाहक बस, ५२ साना कार, ८० वटा ट्रक र ट्याक्टर दुर्घटनामा परेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । चालकको लापरबाहीका कारण १०६ र तीव्र गतिका कारण ११८ दुर्घटना भएका छन् । त्यसैगरी सडकको दुरावस्थाका कारण पनि सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन् ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पृथ्वीराजमार्ग र नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड चितवनमा पर्छन् । धेरै जसो दुर्घटना पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डमा हुँदै आएका छन् । चितवनमा राजमार्ग क्षेत्र ९३ किलोमिटर छ । यसबाहेक अन्य सडक २१ सय ८३ किलोमिटर छ । शहरी क्षेत्रमा बढ्दो सवारीको चापका कारण र साँघुरा सडकका कारण भित्री सडकमा पनि पछिल्ला वर्षहरुमा दुर्घटनाको संख्या बढ्दै गएको छ ।
बढ्दो सवारी दुर्घटना र न्यूनिकरणका उपायबारे हामीले सरोकारवालाको धारणा बुझेका छौं ।
जनशक्ति कम भयो
प्रमुख, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवन
चितवनको भौगोलिक अवस्थाले पनि दुर्घटनाको क्रम बढिरहेको छ । सडक निर्माणको क्रम बढिरहेको छ । जनघनत्व पनि बढ्दो छ । यसै अनुसार सवारी साधनको चाप पनि बढ्दै जाँदा दुर्घटना बढेका छन् । दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले विभिन्न गतिविधिहरु गरिरहेको छ तर पनि विभिन्न कारणहरुले चाहेजति गर्न सकिएको छैन ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा दरवन्दी नै कम छ । अहिले जम्मा ४४ जनामात्रैं ट्राफिक कार्यरत छन् । ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति सवारी चाप, राजमार्ग र सडकको लम्वाईका आधारमा यहाँ १ सय भन्दा बढी ट्राफिक प्रहरी आवश्यक पर्छ । भरतपुर र नारायणगढ जस्तो अत्याधिक सवारी चाप हुने क्षेत्रमा १५ देखि २० जनाले धान्नु परेको छ । १८ घण्टा काम गर्दा पनि गाह्रो भइरहेको छ । कैयौं ठाउँमा आवश्यक देख्दा देख्दै पनि खटाउन सकिएको छैन । यसले गर्दा पनि सवारी साधनलाई नियममा राख्न सहज भइरहेको छैन । जसले पनि दुर्घटना बढेको छ ।
हामीले दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि जनशक्ति परिचालन गर्ने मात्रै हो । सवारी दुर्घटनाको मूख्य कारण त सडक पनि हो । सडकको व्यवस्थापनका लागि त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं । स्थानीय निकाय तथा सरकारले सडकको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि दुर्घटना बढेको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको भरतपुर–नारायणगढको ओरालो खण्डमा डिभाइडर राख्नै पर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं । तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । त्यस्तै सडक निकै व्यस्त हुन थाल्यो ट्राफिक लाइट चाहिन्छ भनेका छौं । त्यसमा प्रगति भएको छैन । व्यस्त बजार क्षेत्रमा देशकै मूख्य राजमार्ग भएकाले पनि दुर्घटनाको जोखिम धेरै छ । यसको व्यवस्थापनका लागि भरतपुरको केन्द्रिय वस टर्मिनललाई व्यवस्थित गरौं भनिरहेका छौं । यस्ता कुराहरुमा हामीले सुझाव दिइरहेका छौं । यसलाई सम्बन्धित निकायले सुनेर कार्यान्वयन ग¥यो भने दुर्घटना न्यूनिकरण हुन सक्छ ।
स्थानीय निकाय र सडक कार्यालयको समन्वय भएन
पूर्व प्रमुख, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवन
नेपालमा सडक निर्माण, मर्मत देखि व्यवस्थापन सम्म नै धेरै समस्याहरु छन् । सडक निर्माण गरिन्छ तर फुटपाथ हुँदैन, नाली बनाइँदैन । भत्किएको ठाउँमा मर्मत गर्न धेरै कुर्नुपर्छ । बनिसकेको सडकलाई कुन रुपले सञ्चालन गर्ने देखि कस्ता सवारी साधनहरु सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्म व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा चासो देखाइएको छैन । यस्तै कारणले हो दुर्घटना बढाउने ।
भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रकै कुरा गरौं । यहाँ साना सवारी साधनको अत्याधिक चाप छ । सडक अत्यन्तै व्यस्त छन् । पोखरालाई हेरौं त्यहाँ अटो रिक्सालाई प्रवेस नै दिइएन । ठूला सवारी साधन मात्र चल्छन् । चाप कम छ । यहाँ पनि ठूला र सुविधा सम्पन्न सवारी साधनको संख्या बढाउनुपर्छ । भरतपुर महानगरपालिकाले नै केही ठूला सवारी साधन ल्याएर सञ्चालन ग¥यो भने सानाहरु घट्दै जान्छन् । यसले सडकमा सवारी साधनको चाप घटाउँछ । दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न कि त सडक ठूलो बनाउनुपर्छ कि त सवारी साधनको चाप घटाउनुपर्छ । हामीले दुवै गर्न सकेनौं । यस्ता कुराहरु स्थानीय निकायले आफैँले कानून बनाएर गर्न मिल्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा यहाँ स्थानीय निकाय र सडक कार्यालयको बिचमा जिम्मेवारी प्रष्ट छैन । भरतपुर महानगरपालिकाको मुखैमा राजमार्ग छ । सडक कार्यालय महानगरले गरोस भन्छ महानगर सडकले गर्नुपर्ने काम हो भन्छ । यो विवादले यहाँको सडकको विजोग छ । दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो छ । सडक निर्माणको क्रममा एक तर्फको एक लेन सडक नै गायव भएको छ । यति व्यस्त सडकमा एक सय मिटरको फरकमा जेब्रा क्रसिङ् बनाइएको छ । यस्ता कुरामा ध्यान नदिँदा पनि दुर्घटना बढ्ने गरेका छन् ।
ट्राफिक व्यवस्थापन त देश विकासको आधार नै हो । जति सडक र ट्रफिक व्यवस्थापन भयो उती देशको विकास भएको मानिन्छ । त्यसैले सबै निकायले आपसि समन्वयमा जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न सक्यो भने दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।
महानगरपालिकाले सबैसँग समन्वय गर्छ
प्रबक्ता, भरतपुर महानगरपालिका
सडक निर्माणको सवालमा सरकारी निकायका बिचमा बाहिर सुनिए जस्तो विवाद छैन । बाइपास रोड निर्माणको क्रममा केही विवाद जस्तो देखिए पनि त्यो समाधान भयो । सरकारी निकायहरु बिच समन्वय गरेर विकासको काममा अघि बढ्ने हो ।
भरतपुर महानगरपालिका अगाडीको राजमार्गको व्यवस्थापनको बिषयमा पनि बाहिर देखिए जस्तो विवाद छैन । सडक विभागसँग विवाद भएको देखि होटल तथा सपिङ सेन्टरहरुको दवावमा प¥यो भन्ने सम्मका कुराहरु आए तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । चौविसकोठी देखि पूल्चोक सम्म डिभाइडर राख्ने योजना हो । गत वर्ष सबै सकिएन । अव एकाध महिनामा ओरालो खण्डमा डिभाइडर राखिनेछ । यो सडक विभागसँगको समन्वयमै हुनेछ । डिभाइडर राखिएपछि दुर्घटना केही भने पनि कम हुने अपेक्षा छ ।
त्यसैगरी नारायणगढको पूल्चोकमा ट्राफिक लाइट राख्ने विषयमा पनि तयारी हुँदैछ । केही समय अघि एक कम्पनीसँग समन्वय गरेर सहिदचोकमा राखिएको लाइट सफल हुन सकेन । त्यसलाई हटाएर पूल्चोकमा राख्ने गरी तयारी भएको छ । विस्तारै ट्रफिक लाइट अन्यत्र पनि थपिन्छ । त्यस्तै महानगरपालिकाले जिल्ला ट्राफिलक प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरेर फुटपाथ व्यवस्थापन, पार्किङ व्यवस्थापनलगायतका कामहरु गरिरहेको छ । महानगरकै नगर प्रहरीहरुले पनि काम गरिरहेका छन् ।
सडक होइन अनुशासन साँघुरो भयो
संयोजक, वे ग्रूप
हाम्रो सँस्थाले विगत दुई वर्ष देखि ट्राफिक सचेतनाका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । विशेषत ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा उनीहरुलाई सघाउने र सडकमा पुगेर विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम हामीले गरेका छौं । तर पनि दुर्घटना बढिरहेकै छ ।
दुर्घटना बढ्नुमा दोष धेरैको छ । सबैभन्दा ठूलो दोष त चालककै हो । ऊ आफैं सचेत नभएसम्म दुर्घटना कम हुँदैन । चालकहरु अनुशासित हुनै पर्छ । यहाँ सडक होइन व्यक्तिको अनुशासन साँघुरो हुँदा दुर्घटना बढेको छ । त्यस्तै, अनुशासनमा राख्ने सँस्थाको काम पनि प्रभावकारी छैन । कानूनको कार्यान्वयन त्यति प्रभावकारी छैन । कार्यान्वयन गरिहाले पनि राजनीतिक दवाव बढी हुन्छ । कर्मचारीले दवाव थेग्न सक्दैन । यसको नकरात्मक असर बढिरहेको छ ।
सडकका खाल्डा खुल्डी पुर्ने, राजमार्गमा आवश्यकता अनुसार जेब्रा क्रसिङ्, डिभाइडर राख्ने, ट्राफिक लाइट राख्ने, ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति बढाउने र कानूनको सही कार्यान्वयन गर्ने हो भने दुर्घटना कम हुन्छ ।